Dr Ansumali Joshi's Diabetes, Thyroid & Endocrine Clinic, Kathmandu, Nepal: 11/1/12 - 12/1/12
मधुमेह यौनजीवनको अन्त होइन
काठमाडौ, मंसिर २ - तपाईंलाई थाहा छ, सामान्य व्यक्तिको दाँजोमा मधुमेह प्रभावितहरूमा लिंगमा पर्याप्त तनाव नआउने (स्तभन दोष/इरेक्टाइल डिसफङ्सन) समस्या डेढ दशकअघि नै आउने सम्भावना हुन्छ । यो समस्या सामान्य व्यक्तिमा १५ प्रतिशतसम्म पाउने गरिए पनि मधुमेह प्रभावितहरूमा ५५ प्रतिशतसम्म पाइन्छ ।
मधुमेह रोगीहरूमा यौन सम्बन्धी समस्या आमव्यक्तिको तुलना बढी हुन्छ । मधुमेह रोगी पुरुष र महिलाको यौन समस्या फरक फरक हुन्छ ।
'लामो समयसम्म मधुमेह भएका ४० प्रतिशत महिला र पुरुषमा यौनेच्छामा कमी पाउने गरिन्छ । पुरुषमा भने लिंगमा पर्याप्त तनाव नआउने मुख्य समस्या छ' इन्डोक्राइनोलजिस्ट डा. अंशुमाली जोशी भन्छन्, 'तर चिनी र उच्च रक्तचापलाई रोगको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै नियन्त्रित राख्दा यो समस्या नहुन पनि सक्छ ।'
उनका अनुसार, मधुमेह हुनासाथ यौन समस्या सुरु हुन्छ भन्ने होइन । चिकित्सककहाँ पुग्ने पुरुषले भने आफ्नो यौनजीवनमा देखिएको समस्यालाइ पोखेर उपचार खोजे पनि महिलाहरू भने यसबारे केही नबोल्ने गरेको डा. जोशी बताउँछन् ।
लिंगमा पर्याप्त तनाव नआउनुका पछाडि स्नायु वा रक्तनलिका सम्बन्धी समस्या कारक तत्त्वको रूपमा रहने गरेको छ । यो समस्या मानसिक प्रभावले समेत हुन सक्छ ।
अमेरिकन डाइबिटिक एसोसिएसनको तथ्यपत्र अनुसार, चिन्ता र डिप्रेसनले यौन इच्छालाई समाप्त पार्न सक्छ । यस्तोमा औषधि र काउन्सिलिङले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।
लिंगको नसालाई चिनीले असर गर्ने उल्लेख गर्दे जोशी भन्छन्, 'कम्तीमा तीन/चार वर्ष अनियन्त्रित चिनीको समस्या भएकाहरूमा यौन क्षमता सम्बन्धी अक्षमता पाउने गरिन्छ ।' मधुमेहकै कारण यौन समस्या हुन समय लाग्ने गरे पनि मानसिक रूपले असर गरेकाहरूलाई भने यो समस्या धेरै छिटो समेत हुन सक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा ३४ करोड ७० लाख व्यक्तिलाई मधुमेहको समस्या छ । करिब ८० प्रतिशत मधुमेहजन्य मृत्यु मध्यम र निम्न आय भएका राष्ट्रमा हुने गरेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा भने १० देखि २० प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामा मधुमेहको आकलन गरिएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा उमेरको चार दशक नाघेका अघिकांश चिनी रोगीहरू यौन समस्या लिएर चिकित्सककहाँ जाने गरेका छन् । सामान्य व्यक्तिलाई भने ६०/७० वर्षपछि यौनेच्छामा कमी हुने गर्छ ।
डा. ओममूर्ति अनिलका अनुसार, सामान्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका करिब ८० प्रतिशतसम्म रोगीहरूलाई केही समयभित्रै उच्च रक्तचाप हुने गर्छ ।
लिंगमा पर्याप्त कडापन नआउनुको कारण उच्च रक्तचाप समेत हुन सक्ने उल्लेख गर्दै डा. जोशी भन्छन्, 'लिंगमा पर्याप्त तनाव नआउने मुटुका रोगीलाई चिकित्सकीय परामर्शमा सिल्डेनाफिल साइट्रेट (भियाग्रा) दिन सकिन्छ ।' मुटुका बिरामीलाई उक्त औषधि दिनै नहुने नरहेको जनाउँदै उनी नाइट्रेट औषधि लिइरहेका मुटु रोगीलाई भने यो औषधि दिन नमिल्ने बताउँछन् ।
मधुमेहका पुरुष रोगीहरूमा रेट्रोगेट इजाकुलेसन अर्थात् वीर्य निस्कन ढिलो हुने समस्या समेत पाइने गरेको छ । पिसाबकै बाटोबाट वीर्य र पिसाव दुवै निस्किन्छ, तर यस्ता समस्या भएकाहरूमा पिसाबको बाटोबाट वीर्य निस्किन कठिनाइ हुन्छ ।
पुरुष वा स्त्री हार्मोनको कमीले समेत यौन सम्बन्धी समस्या देखिनेहरूलाई भने यस्ता हार्मोन दिएर उपचार गरिने डा. जोशी बताउँछन् । पुरुष रोगीमा टेस्टेस्टोरोन हार्मोनको कमी समेत पाइन्छ । मधुमेह र डिप्रेसनबीच सम्बन्ध कोट्टयाउँदै उनी भन्छन्, '२० देखि ३० प्रतिशत मधुमेह रोगीमा डिप्रेसन पाउने गरिन्छ । यसले समेत यौनजीवन प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।'
महिलाहरूमा देखिने पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रमको मधुमेहसँग सम्बन्ध रहेको छ । महिनावारीमा गडबडी, अनुहारमा रौं, डन्डीफोर, मोटोपन, निःसन्तान आदि मधुमेहसँग सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै डा. जोशी यसले समेत यौनजीवन प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् ।
मधुमेह रोगीहरूमा यौन वा जननेन्द्रीय सम्बन्धी समस्याको सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ ।
मधुमेह प्रभावित व्यक्तिहरूको यौनजीवन रोगको प्रभावबाट मुक्त हँुदैन । मधुमेहका रोगीहरूमा योनिको संक्रमण बढी हुने उल्लेख गर्दै डा. जोशी यसरी समेत यौनजीवन असहज भइरहेको बताउँछन् । महिला मधुमेह रोगीहरूमा यौनक्रियाका बेला चिप्लो पदार्थको श्राव नहुने समस्या समेत हुने गर्छ, जसले यौनक्रियाका बेला पीडा उत्पन्न गर्न सक्छ ।
मधुमेहले नसामा असर गरेर यौन दुर्बलता उत्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै डा.ओममूर्ति भन्छन्, 'उच्च रक्तचाप लगायतमा दिइने केही औषधिले समेत लिंगमा तनाव नआउने समस्या हुन सक्छ ।' मधुमेहले गर्दा मृगौलामा असर परिसकेकाहरूमा भने यौन दुर्बलता बढी हुने डा. ओममूर्ति बताउँछन् ।
मधुमेह रोगीहरूमा यौन सम्बन्धी शिथिलता पाइने गर्नाले यौनक्रियाकै बेला रोगीहरू अचानक डिप्रेसनमा आउन सक्छ र छिट्टै थाकेको अनुभव गर्न सक्छन् । डा. ओममूर्तिका अनुसार, यौनदुर्बलता भएका रोगीहरूमा मुटु रोगको सम्भावना बढी हुन्छ । यौन दुर्बलताका लागि पुरुषले सिल्डेनाफिल साइट्रेटको औषधि बिनाचिकित्सकीय परामर्श प्रयोग गरे मुटुको समस्या भएका मधुमेह रोगीहरूमा अचानक मुटुको समस्या देखा पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
रगतमा चिनीको मात्रा निर्धारित स्तरभन्दा माथि भए यसलाई मधुमेह रोग भनिन्छ । जीवनभरिको यो रोगमा शरीरमा इन्सुलिन आवश्यकताको दाँजोमा कम निर्माण हुन थाल्छ । यसले गर्दा चिनी उपयुक्त रूपमा डढेर ऊर्जामा परिवर्तन हुन सक्दैन ।
यसैले रगतमा चिनीको स्तरमा वृद्घ िहुन्छ । जब रगतमा एउटा सीमाभन्दा बढी चिनी उत्पादन हुन्छ, शरीरले यसबाट मुक्ति पाउन मृगौलाको माध्यमले पिसाबाट चिनी बाहिर फाल्न थाल्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार, पिसाबमा चिनी नदेखिनु मधुमेह रोग नभएको प्रमाण भने होइन ।
यौनक्षमता कायम राख्न
पुरुष हुनुहुन्छ वा महिला, नलजाई चिकित्सकसँग यसबारेमा कुरा गर्नुस् । तपाईंले उपचार गराइरहनुभएको चिकित्सकलाई मधुमेह रोगीहरूमा देखिने यौन समस्याबारे राम्ररी थाहा छ । चिकित्सकले तपाईंको यौन समस्याको कारण मधुमेह हो वा अरू कुनै भन्ने ठम्याउनेछन् र हालसम्म उपलब्ध उपचार, विकल्पहरूबारेे सुझाव दिनेछन् ।
तमाखु, चुरोट आदिको अम्मल हटाउनुस् । धूमपानले रक्तबाहिनी नलीलाई साँगुरो बनाउँछ । यसले गर्दा रगतको प्रवाह कम वा बन्द हुन सक्छ ।
मद्यपान बन्द गर्नुस् । रक्सीले मधुमेहीहरूको यौन क्षमतालाई कम गर्छ । यति मात्र नभएर रक्सीले रगतको नलीलाई समेत नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
रगतमा चिनीको स्तरलाई नियन्त्रणमा राख्नुस् । यो स्तर नियन्त्रणमा रहे मधुमेहले तपाईंको स्नायु र रक्तनलीमा विकृति ल्याउँदैन । स्नायु र रक्तनलीमा विकृतिले यौन क्षमतामा कमी ल्याउँछ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २ ०९:३०
Posted by Dr Ansumali Joshi at 9:51 AM
Diabetes isachronic disease for which there is no cure. It isamajor cause of illness and premature death. But the good news is that Type2of diabetes is both preventive and curable. Find out what precautions one has to take in this video.
Posted by Dr Ansumali Joshi at 8:00 AM
मधुमेह र आनीबानी
काठमाडौ, कार्तिक २७ - यदि तपाईंलाई मधुमेह छ भने जीवनयापनको शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । सधैं स्वस्थ खानाका साथै नियमित व्यायाम गर्नु जरुरी हुन्छ । रोग नियन्त्रणका लागि औषधी पनि खानुपर्ने हुनसक्छ र कसैलाई इन्सुलिनको इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । साथै नियमित रगतमा सुगरको मात्रा जाँच्नुपर्छ ।
मधुमेहका बिरामीका लागि कुनै विशेष खानाको जरुरत पर्दैन । हामीले हरेक दिन खाने खानाबाट नै स्वस्थ खानाको व्यवस्था गर्न सक्छौं । तर निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ:
१. चिल्लो र नुन कम भएको खानेकुरा खानुपर्छ ।
२. रेसायुक्त खानेकुरा जस्तै: सागसब्जी, फलफूल, गेडागुडी खानुपर्छ ।
३. दूध तथा दूधबाट बनेका खानेकुरा, बोसोरहित मासु तथा माछा, अन्डाको सेतो भाग मधुमेहका बिरामीका लागि राम्रा खानेकुरा हुन् ।
४. यदि तपाईंको तौल बढी छ भने तपाईंले खाने दैनिक क्यालोरीमा कमी गर्नुपर्छ ।
डाक्टरले तपाईंलाई पोषण विशेषज्ञकहाँ रिफर गर्न सक्छन्, जसले स्वस्थ र सही खानेकुरा तपाईंको स्वादअनुसार छनौट गर्न मद्दत गर्छन् । नेपालीहरूको खानामा कार्बोहाइडे्रट बढी हुन्छ, जस्तै: भात । मधुमेहका बिरामीहरूले ५०-६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बोहाइडे्रट खानु हुँदैन । भात खान नहुने होइन, तर मात्रा मिलाएर खानुपर्छ । नेपालीहरू धेरै माछा, मासु र अन्डा खाने हुनाले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा पुग्छ । तर माछा-मासु नखानेहरुले गेडागुडी, दाल, पनिर आदिबाट प्रोटिनको मात्रा पुर्‍याउनुपर्छ । अब आयो चिल्लोको कुरा । घ्यु पूरै बन्द गर्नुपर्छ । तेलमा सनफ्लावर, तोरी वा ओलिभ तेल प्रयोग गर्नुपर्छ । तेललाई घरिघरि तताउनु हानिकारक हुन्छ । तेल र बोसो बढी भएको खानेकुरा खानु हुँदैन । अन्डाको पहेँलो भाग खानु हुँदैन, त्यसमा कोलेस्टोरल बढी हुन्छ । अनुसन्धानहरूमा नेपालीहरूको रगतमा एक किसिमको बोसो अर्थात् 'ट्राइग्लिसराइड' बढी देखिएको छ । यदि ट्राइग्लिसराइड ५०० एमजी/डीएलभन्दा बढेको छैन भने यसलाई औषधीभन्दा पनि जीवनशैली परिवर्तन गरेर घटाउनुपर्छ । दिनमा एउटा फल खाने, सागसब्जी बढी खाने र सलाद खानुपर्छ । तौल धेरै छ भने व्यायाम र खानपिनबाट कम गर्नुपर्छ । धेरै नेपालीले खानपिनमा त्यति ध्यान दिंदैनन् । कोही-कोहीचाहिं खाना नै नखाइकन सुगर कन्ट्रोल गर्न खोज्छन्, जुन झन् हानिकारक हुन्छ ।
यदि तपाईंको सुगर नियन्त्रणमा छ भने तपाईं केही मात्रामा मदिरापान गर्न सक्नुहुन्छ । बियर र वाइन सकेसम्म सेवन नगर्नुस् । हार्ड डि्रंक एक या बढीमा दुई पेगसम्म लिन सक्नुहुन्छ । खाजा खाँदा सलाद या चिल्लोरहित माछा-मासु लिन सक्नुहुन्छ । तर एउटा कुरा सधैं के याद राख्नुपर्छ भने भोको पेटमा मदिरापान गर्नु हुँदैन । यसो गरेमा शरीरमा सुगर कम भएर बिरामी बेहोश हुनसक्छ ।
धूमपानले तपाईंलाई मुटुको रोग र प्यारालाइसिस हुने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा बढाउँछ । त्यसैले यदि तपाईं धूमपान गर्नुहुन्छ भने आजैदेखि धूमपान बन्द गर्नुस् ।
मधुमेहका बिरामीले नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । यसका निम्न फाइदा हुन्छन्: १. रगतमा सुगरको मात्रा ठीक राख्न मद्दत गर्छ ।
२. तौल घटाउँछ ।
३. मुटु, नसा र फोक्सो स्वस्थ राख्छ ।
४. जाँगर बढाउँछ ।
समाजमा सुगरका बिरामीहरूमाझ एउटा अनौठो धारणा छ । सकेसम्म किन औषधी खाने, चाहे सुगर जतिसुकै किन नहोस् । औषधी सुरु भैसकेको अवस्थामा नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्छ । इन्सुलिन लगाइराखेको हुनुहुन्छ भने एक डोज इन्सुलिन पनि छुटाउनु हुँदैन । औषधी अथवा इन्सुलिनको डोज डाक्टरका सल्लाहबिना आफैं तलमाथि गर्नु हुँदैन । नियमित रूपमा रगतमा सुगरको मात्रा जाँच गराउनुपर्छ ।
मधुमेहसँग सम्बन्धित रोग:
मधुमेहका धेरै बिरामीमा उच्च रक्तचाप पनि हुन्छ । त्यसैले नियमित रूपमा रक्तचापको जाँच गराउनुपर्छ । त्यस्तै मधुमेहका कारण आँखा, मिर्गौला, मुटु र नसामा असर पर्न सक्छ । वर्षमा एकचोटी आँखाको जाँच, मिर्गौलाको जाँच र कोलेस्टोरलको जाँच गराउनुपर्छ ।
खाली पेटको सुगर एफबीएस १३० एमजी/डीएलभन्दा कम भएमा र खाना खाएको दुई घन्टापछिको सुगर पीपीबीएस १८० एमजी/डीएलभन्दा कम भएमा सुगर कन्ट्रोल भएको मानिन्छ । त्यस्तै एचबीएवानसी नामको एक किसिमको रगतको जाँच गर्दा ७ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम भएमा राम्रो मानिन्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने बिस्तारै आँखाको पर्दा/रेटिनामा असर गर्न सुरु हुन्छ । त्यसबारे बिरामीलाई थाहै हुँदैन र एकैचोटी अन्धो भएपछि मात्र उसलाई थाहा हुन्छ । त्यस्तै शरीरका धमनीहरूमा बोसो जम्मा हुँदै जान्छ र एकदिन अचानक हृदयाघात वा प्यारालाइसिस वा किड्नी फेल भएपछि मात्र बिरामीले पत्तो पाउँछ । यो सबै हुन नदिन सुगरलाई राम्रो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ । त्यसकारण सुगरका बिरामीले खानपिन र व्यायामबाट एफबीएस र पीपीबीएस कन्ट्रोलमा राख्न नसके औषधी सेवन जरुरी छ । सुगरको औषधीको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ भनेर औषधी नखाँदा झन् धेरै खतरा हुन्छ ।
हरेक मान्छेले ३५ वर्षपछि नियमित रूपमा सुगर जाँच गराउनुपर्छ । यदि सुगर देखियो भने सम्बन्धित डाक्टर (इन्डोक्राइनोलोजिष्ट) लाई देखाउनुपर्छ । खानपिन ठीक राख्ने, नियमित व्यायाम गर्ने र औषधी सेवन गर्नाले सुगर कन्ट्रोलमा रहन्छ, मधुमेहका कारण हुने अरु रोगबाट बच्न सकिन्छ र मधुमेहसँगको जीवन सुखमय रहन्छ ।
नर्भिक इन्टरन्यासनल हस्पिटलमा कार्यरत डा. जोशीले इन्डोक्राइनोलोजीमा डीएम डिग्री प्राप्त गरेका छन्
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक २७ ०९:४८ कान्तिपुर
Posted by Dr Ansumali Joshi at 2:47 AM